Twin Seoul Stage Danho rechishanu uye "regai kuenda" riri
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Twin Seoul Stage Danho rechishanu uye "regai kuenda" riri
In mudariro chairo kusvika vafemberi [3500 Yen Free yokunyatsoongorora] kuti kuwana nzira
mapatya mweya vakadzokera zvakare mumwe mweya yepakutanga, chikuva wechishanu kamwe kurega aida vamwe vebato ravo zvichida nguva kuongororazve pacharo.
vanhu vaviri vade mumwe zvakasimba, yakawiriranwa kurwadziwa apo ndinoda zvikuru, vamhanyi akatiza ukama, Chaser kudzinga nayo, ndicho mamiriro umo pfungwa akashatirwa, ukuwo.
Zvisinei, kuti mapatya mweya zvakare vanosangana, akasungwa zvakasimba, unofanira mumwe kwazisai nehope pakunamata. To chisinga-, inofanira kubvisa matambudziko kwakaitwa mumwe panguva ino.
In basa iroro, kuraswa kuzvikudza pachake kuti akanga akatambudza anokumhan'arira uye ini, zvinokosha kuti unzi kutanga nerimwe mweya. Chii chakaita izvozvo, anosunungurwa kubva murudo kare zvimiso, tinogona kudurura Unconditional. In
cheshanu Danho mapatya Seoul mumhanyi uye chaser ndiyo
? 2 ukama nguva yavo kuti kuda mumwe zvokunamata kusiyiwa kuna Mwari, yainzi ukama maviri zvose vasara kuna Mwari iwe. By mumwe oga aine kure, chichagamuchirwa vakatarisana nerimwe zvinetso, asi Mwari ndiye saka regai yakavhomorwa pamwe zvakare chete zvakasikwa kana wasvika chisinga- nomumwe pakunamata.
Zvisinei, chete kana mumhanyi kana iwe kumirira kutaura kana kudzoka chaser yepakutanga, handizvo. Chaser kamwe vakasiya nokuzvitutumadza kuti mumhanyi, unofanira kuongororazve chii mwoyo wangu uye mweya ndaitsvaga.
uye vanomhanya, vachaedza kukanganwa kuyeuka kutya pakadzika rudo pakati Chaser, ndaiziva kuti kutsvaka chaser ari mweya pamwero, tichazvipira rudo haaiti lehm?.
? 2 vanhu Chaser kuti akanga apukunyuka kuna
mumhanyi kutevera dzidziso saizvozvo, vamhanyi achamirira kudzoka zvakare kwavo yepakutanga, asi zvinokosha kuti kuwedzera nokudhiraivha panguva pachangu panguva ino. Zvisinei, kuti tive zvakakwana kumutsa yavo, vamwe vanhu vanofunga hazvigoni zvakare zvikuru mumhanyi.
Zvisinei, vaviri vanhu ari mapatya mweya, ticharamba ichishanduka saizvozvo neimwe. Mune mamwe mazwi, imwe nguva kuti kwazisai chisinga- zvokunamata kuwedzera pachako zvakakwana, haufaniri ikoko kuchinja kunoitika. Nemamwe mazwi, ini handigoni kuvazve vamhanyi, handifungi ndimene kuva rimwe bato ndiyewo kugadzirira zvakakwana.
Unconditional Regai akananga yakapoteredza
rechishanu Danho anoziva Unconditional kuti akadira twin mweya webato kwete chete, akadurura rudo rukuru kune vanhu kumativi, zvose nemiwo uchava kukumbirwa kukanganwira. The rudo, huchakurumidza zvakakwanisika uchaendesa resonance ari mapatya mweya. Pasina kurumidza
, achiziva kuti vaviri vanhu vane kurayira kwavo mweya pamwero mumwe, unofanira nditenderei yakavhomorwa zvakare pamwe chete vaviri vanhu vaMwari.
In rechishanu pachikuva, kwete chete kuziva Unconditional kuti akadira twin mweya pati, akadurura rudo rukuru kune vanhu, uyewo zvinoda kukanganwira zvose. The rudo, huchakurumidza zvakakwanisika uchaendesa resonance ari mapatya mweya. Pasina kurumidza